मस्तिष्क मूल बातें: न्यूरोकोमिकल्स, पहिलो चुम्बन सम्झनुहोस् | इनाम पुरस्कार
मस्तिष्क आधारभूत न्यूरोकोमिकल्स
तपाइँको पहिलो आनन्दित अंतरंग चुम्बन सम्झनुहोस्?
तपाईंको पहिलो रोमांटिक मुठभेड भयो भने, संभावनाहरु तपाई को बारे मा सबै कुरा सम्झना ... ठाँउ, गंध, स्वाद, तपाईं पहने भएका थिए, होंठ मिश्रण को, संगीत खेल र अंतरिमता को भावना र भविष्य को लागि आशा। यो सम्भव भयो जब तपाईं किशोरी हुनुहुन्थ्यो। यो पहिलो बारेमा रोमान्टिक हुन मजेदार छ, तर के तपाईंले थाहा पाउनुभएको थियो कि यो तपाईंको दिमागमा न्यूरोकोमिकल्सको क्यास्केड्सको अनुभव थियो?
यो प्रेमको रहस्यबाट यो लिने छैन, तर यसले हामीलाई बुझ्न मद्दत गर्नेछ किन केहि भावनाहरु र अनुभवहरू यति बलियो छन् र यस्तो स्थायी सम्झनाहरू बनाउँदछ।
त्यसो भए पछि के भयो? हाम्रो इच्छाको वस्तुको पहिलो झलकमा, हाम्रो हृदय एकदमै चाँडै हरायो र हामीले 'ग्लेइट' बढी हुन सक्छ वा सतावट गर्न थाल्छ। त्यो हाम्रो अहंकार राज्य थियो एड्रेनालिन। खुशी र इनामको प्रत्याशित छ जसले हामीलाई कसैलाई नयाँसँग बाँड्न को लागी प्रेरित गर्यो, यो उत्तेजित भयो त यो प्राप्त-यो-न्यूरोकोमिकल dopamine। (यो भिडियो लिङ्क एक साक्षात्कार हो जो विशेषज्ञहरु लाई डोपामिन द्वारा मध्यस्थता को इच्छित पहलूहरु लाई मनपर्छ र रुचि को खोज गर्दछ।) डोपामिन एक भावुक घटना को स्मृति मा विशेष रूप देखि एम्बेड गर्न मा मदद गर्दछ, खासकर यदि हामी यो सोच या कुरा गरदै रहयो। किशोरहरूले वयस्क वा बच्चाहरू भन्दा बढी डपामिन उत्पादन गर्छन् र यसको लागि अधिक संवेदनशील हुन्छन्।
चुम्बनको आनन्दित भाव र आफैलाई गम्भीरताले बाढीबाट आएको थियो Opioids इनाम केन्द्रमा जुन डोपामिन पछि छिर्यो। फेरि, डोपामिनको रूपमा, किशोरहरूले वयस्क वा छोराछोरी भन्दा बढी ओपियोड्स उत्पादन गर्छन्।
हामी कसैलाई नजिक वा अन्तरर्वार्ता दिंदा सम्बन्ध र विश्वासको महसुसबाट हो ओक्सीटसिन। यदि तपाईलाई खुशी र सामग्री महसुस गर्नुभयो भन्ने सम्भावित साथी भेट्टाउन, यो शायद वृद्धि भएको स्तर द्वारा उत्प्रेरित गरिएको थियो serotonin मस्तिष्कमा। यो जब हामी सामग्री महसुस गर्छौं वा सोशल पदानुक्रममा स्थितिको भावना हो, जस्तै कसैले कसैलाई प्रेम गर्ने मौका पाएको छ। कुनै पनि टाउको दुखाइ वा दर्दको रूपमा हराउनेछ endorphins हजुरआमाले भने।
तपाईंले यो भावनात्मक घटना यति राम्रोसँग सम्झ्नुभएको छ किनभने, तपाईंको आदिम मस्तिष्कमा यो जीवन परिवर्तनशील कार्यक्रम थियो। यसले तपाईंको दिमागमा बलियो मेमोरी मार्ग प्रशोधन गरेको छ, तपाईंलाई सुखद भावनाको सम्झना दिलाउनेछ र तपाईंलाई फेरि बारम्बार दोहोरिने प्रोत्साहन दिनेछ।
के अर्को भयो?
यदि तपाईंको प्यारीलाई सम्पर्कमा फिर्ता लिइयो र मिति चाहियो, तपाईको हृदयले फेरि न्युयोर्केमिकलको चक्र आनन्द र प्रत्याशित आशाको साथसाथै सम्भावित खुशीको भविष्यमा तपाईको विचारमा एक चोटि फेरि हराएको थियो।
यद्यपि, उनी वा उनी एकअर्का मुठभेडमा साँच्चै चासो थिएनन्, तपाईंले सम्भवतः उत्पादन गर्नुहुनेछ cortisol, तनाव न्यूरोकोमिकल पनि अवसाद संग जोडिएको छ। व्यक्ति वा अवस्थाको बारेमा म्यानुअल तरिकामा गैर-स्टप सोच्नु भयो, तपाईले / उनी गर्नुभयो वा गरेन भने, सम्मोहनको कम स्तरको असर हुन सक्छ। यो पनि अपमानजनक बाध्यकारी विकारकर्ता मा पाइन्छ। हाम्रो लक्ष्य वा इच्छाको निराशामा गुनगुनाउन सक्छ मानसिक स्वास्थ्य क्षमता यदि हामी स्थितिको बारेमा फरक विचार गर्न सिक्न सक्दैनौं।
धेरै अधिक डोपामिनि र पर्याप्त सेरोनन पर्याप्त छैन, मस्तिष्क को "खुशी" र "खुशी" मार्ग को neurotransmitters क्रमशः, हाम्रो मूड को प्रभावित। तथापि सम्झनुहोस्, त्यो खुशी र आनन्द एउटै कुरा होइन। डोपामिनले "इनाम" न्यूरोट्रांसमीटरलाई "इनाम" भनेको हाम्रो दिमागी बताउँछ: "यो राम्रो लाग््छ, मलाई थप चाहन्छु।" तैपनि धेरै डपामिनिन सिग्नल लत बढ्छ। Serotonin "सन्तुष्टि" न्यूरोट्रांसमीटर हो जुन हाम्रो दिमागी बताउँछ: "यसले राम्रो लाग्छ। मसँग पर्याप्त छ। म चाहँदैन वा अरु बढी चाहिन्छ। "तैपनि धेरै सेरोटोनन कमजोरीको कारणले बढ्छ। आदर्श रूपमा, दुवै इष्टतम आपूर्तिमा हुनुपर्छ। डोपामिन तल serotonin तल ड्राइव गर्दछ। र पुरानो तनाव दुवैलाई तल छाउछ।
सामग्रीको लागि सिक्न र स्थिरताको स्थिर स्थिरता खोज्न चाहँदैनन् सिक्नको लागि एक प्रमुख जीवन पाठ हो। त्यसैले हाम्रो विचारहरू, काल्पनिकहरू र भावनाहरू व्यवस्थापन गर्न सिकिरहेको छ।
Loretta Breuning द्वारा एक पुस्तक "शुभ ब्रेनको शुभकामना"र उनको वेबसाइट हाम्रो खुसी र दुखी न्युरोकेमिकलको लागि मज्जा परिचय प्रदान गर्नुहोस्।
<< Neuroplasticity इनाम प्रणाली >>